Sitelock: Khusela iwebhusayithi yakho yeWordPress kunye nabaNdwendweli Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 15, 2018 Douglas Karr
Ukhuseleko lweWordPress yenye yezo zinto zihlala zishiywa kude kube lixesha. Phantse kube kanye ngekota ndiceliwe ukuba ndincedise ukucoca indawo ehlaselweyo. Uhlaselo lwenzeka ngenxa yokuba iWindowsPress ishiywe ngaphandle kokuhlaziywa kwaye umngxunya wokhuseleko owaziwayo uthathwe ithuba. Okanye, rhoqo, ngumxholo ophuhliswe kakubi okanye iplagi engagcinwanga ihlaziyiwe.
Kukho iitoni zezizathu ezahlukeneyo zokugenca i-WordPress, kubandakanya ukufumana iidilesi ze-imeyile zomsebenzisi kunye nezimvakalisi, ukufaka i-backlinks ukukopa iinjini zokukhangela, okanye ukufaka inalware eqhuba ukugcwala kwabantu kwiindawo ezingafunekiyo. Abagculeli abaphuhlisa oku benza ngenene umsebenzi we-bang-up wokonakalisa indawo yakho, nabo. Baza kufaka iskripthi esifaka izikripthi… ukuze ucoce ifayile enye kwaye kwimizuzu embalwa emva koko iphinde yosuleleke.
Okona kubi kukuba, xa indawo yakho inentsholongwane kwaye ungayazi, indawo yakho iya kuzifumana kwangoko kuludwe lwabaphengululi kunye neenjini zokukhangela ezisetyenziselwa ukunqanda ukuthumela iindwendwe kuwe.
Iindawo ezimbalwa endizicocileyo ziye zachaphazeleka, zifuna ukuba ndithathe indawo ngaphandle kweintanethi, ndibhale ngaphezulu iifayile eziphambili zeWordPress, emva koko ndihambe ngomgca ngemixholo, iiplagi kunye nomxholo okwenyani ogcinwe kwindawo yogcino lwedatha ukufumana i-malware. Kubuhlungu.
Ukuqhekeka kwiWordPress kuyakhuselwa
Ngaphandle kokugcina iWindowsPress, iiplagi zakho, kunye nemixholo kwiinguqulelo zamva nje, kukwakho namaqonga amahle aphandle ukuze ugcine ukhuselekile. Sitelock, inkokheli esekwe kwilifu, isisombululo esibanzi sokhuseleko kwiwebhusayithi, ijikile kwiWordPress kwaye yavelisa uluhlu olupheleleyo lwezinto ezinokukhethwa kumashishini amancinci, aphakathi, kunye namashishini ukugcina iindawo zabo zeWordPress zikhuselekile. Banikezela ngearhente, amashishini kunye nezisombululo ezininzi.
Jonga iiPakeji zeWordPress zeSitelock
Iminikelo ye-WordPress kaSitelock ibandakanya ezi zinto zilandelayo kunye neenkonzo:
Ukukhangela indawo ngokuzenzekelayo
Ukususwa kwe-malware ngokuzenzekelayo
Ukutshekisha ngokuzenzekelayo ingozi
Ukuzaliswa kweWordPress okuzenzekelayo
Ukuskena kwindawo yogcino lwedatha
Ukucoca iziko ledatha
Ukongeza, iSitelock inezinto ezintle zokuphucula indawo yakho yeWordPress, kubandakanya:
Ukuthintela i-bot embi
Ukufayilwa kwendlela okwenziwa ngokwezifiso
Uvimba wovimba uvimba
Xa izinto zingahambi kakuhle, iinkonzo zobungcali zika-Sitelock zinokubonelela ngolungiso olungxamisekileyo lokususwa kunye nokususwa kuluhlu lwabamnyama. Kwaye-ngokungafaniyo nezinye izisombululo phaya-iSitelock ine-24/7/365 yenkxaso efumanekayo kubo bonke abathengi bayo!
ukuxelaSinobulungu be-Sitelock kunye nokukhuthaza iinkonzo zayo.